Etcher: yakapusa app kugadzira bootable media | Linux Vakapindwa muropa
Vazhinji vanoziva nezve mapurojekiti senge Unetbootin, Rufus, nezvimwe, asi pamwe havazive zvakanyanya Etcher. Nekudaro, iyo ndeimwe yemapurojekiti akareruka aunogona kuwana kuti ugadzire wega media inotakurika kana bootable nehurongwa hwekushandisa hwaunofarira kubva pamufananidzo wayo.
Unogona kushandisa akasiyana midhiya, senge USB Flash dhiraivha, zvekunze zvakaoma dhiraivha, uye kunyangwe SD makadhi kugadzira bootable midhiya yeako Raspberry Pi. Kugadzikana kwayo pamwe nekuita kwayo uye kureruka zvinoreva kuti haugone kukumbira zvimwe zvakawanda kubva kuapp ine hunhu uhu.
1 Zvinorevei kugadzira media inotakurika kana inotakurika?
2 Chii chinoitwa naEtcher?
2.1 Iyo Etcher chirongwa
2.2 Shandisa Etcher nhanho nhanho
Zvinorevei kugadzira media inotakurika kana inotakurika?
Gadzira wepakati bootable kana bootable Iyo yakajairika maitiro kune vese avo vanoda kuisa anoshanda system kekutanga, kana iwe ukashandisa bhodhi reSBC senge Raspberry Pi kuishongedza nehurongwa, kana kugadzira system yekubhuroka muLive mode yako distro kana GNU system / Unofarira Linux.
Midhiya inovhurika inogona kugadzirwa kubva pamufananidzo weiyo inoshanda sisitimu. Kazhinji vanogona kuve Mifananidzo yeIO, kunyangwe paine zvekare masystem anouya mumifananidzo yepabhinari senge IMG, nezvimwe. Mamwe mapurojekiti anogona kutouya akaomeswa kana kurongedzwa muZIP, nezvimwe. Kupesana uku kunokonzera matambudziko mumapurogiramu mazhinji ekugadzira midhiya midhiya, asi hazvisizvo naEtcher sezvaunozoona mumashure.
Nezve kwainoenda nharaunda kwawakagadzirwa pakati zvinotanga, zvinogona zvakare kuve zvemhando dzakasiyana. Kazhinji, vanogona kuve vezvenhau (CD, DVD, BD, ...), ndangariro dzeUSB dzakadai sepeni dzinotyaira nemadhiraivha akaomarara, uyezve mememori makadhi senge SD anoshandiswa mumabhodhi eSBC. Munguva yakapfuura, floppy disks nemamwe midhiya aishandiswa zvakare.
Iva zvazvingaite, chinangwa chekupedzisira kugadzira svikiro iro kukwanisa kuzviitira wega paunotanga muchina panowisirwa svikiro uye nekudaro tendera iyo firmware Ziva bootable system, kazhinji mashandiro kana masisitimu avo ekumisikidza.
Zvechii firmware, BIOS kana UEFI Iyo komputa iwe yauri kushandisa inogona kuziva iyo boot midhiya, kazhinji inofanira kunge iine partition tafura uye yakakodzera fomati. Kazhinji, fomati inoshandiswa ndeye FAT32 yeinobvisa midhiya uye ISO9660 yemagetsi midhiya.
Kazhinji izvi zvinoreva iwe uchaishandisa zvese kumhanya Live modes, pamwe nekumisikidza yekushandisa system kekutanga (Windows, macOS, GNU / Linux, FreeBSD, Solaris, OpenELEC, RISC OS, ...) pakombuta, fomati diski uye dzosera kuteedzera kubva pakutanga, nezvimwe.
Chii chinoitwa naEtcher?
Chaizvoizvo inoita zvese otomatiki, ndiko kuti, shandisa ISO mufananidzo, IMG, uye kunyangwe mafaera ane kuwedzera kweZIP uye mamwe marudzi, kugadzira iyo bootable kana bootable system mune yepakati yesarudzo yako. Iwe uchafanirwa kungozvimisikidza wega kuti uve nepakati iyo iwe yaunoda kuigadzira yakagadzirira uye kurodha iyo system mufananidzo.
Iyo Etcher chirongwa
Balena ndiye anovandudza kuseri kwesoftware iyi ine simba uye yakapusa. Vakagadzira iyi Etcher uye vanga vachiivandudza kubvira payakatanga kuoneka payakange ichiri kunzi resin.io pamberi pa2018.
Etcher ndiye yemahara, yakavhurwa sosi, yemahara pasi peApache 2.0 rezinesi uye muchinjiko-chikuva (inoenderana neMicrosoft Windows, Apple macOS, uye yako yaunofarira GNU / Linux distros). Kuitwa kwakazara kutama kubva kumafaira emifananidzo kuenda kune yekuchengetedza midhiya mukubwaira kweziso pasina kana kunetsa.
Vagadziri vayo vari kuwedzera mashandiro uye kugadzirisa kuchirongwa. Panguva ino iwe unogona kuwana inonakidza yehunyanzvi hunhu hunoitisa kuti ibude pachena pamusoro pedzimwe nzira:
Kuzviona-otomatiki enhau iyo ichaiswa system yekushandisa, saka haufanirwe kuzvisarudzira wega.
Kuchengetedza pakurwisa hard drive. Mapurogiramu mazhinji haana uye unogona netsaona sarudza hard drive kubva pakombuta yako uye wopedzisira wabvisa yakakosha data.
Otomatiki yekupisa. Kamwe iyo yekugadzira midhiya painotanga, inobvumidza iwe kuti ugadzire akati wandei kopi kumagumo kuti uve neakawanda bootable kana bootable midhiya. Izvi zvakanaka kana iwe wakazvipira kudzidzo kana kumakambani, uko akati wandei midhiya akaenzana anodiwa kumapoka akasiyana
Ivo vanozowedzerawo midhiya mitsva uye maficha munguva pfupi iri kutevera, senge rutsigiro rwekugadzira midhiya nekuchengetedza kushingirira, izvo zvinoshanda kwazvo kuLinux distros muLive mode kuitira kuti data uye marongero agone kuponeswa uye kwete kubviswa kana uchibvisa midhiya. Izvi zvave kutowanikwa nemamwe maapplication ekushandisa nekumiririra yakazvimiririra iyo kunyora kunobvumidzwa pane inotakurika midhiya.
Shandisa Etcher nhanho nhanho
Para shandisa EtcherIwe unongofanirwa kutevera matanho mashoma asingakwanise kuve akareruka kunyangwe kune avo vasina hunyanzvi hwemakomputa. Ndosaka zvichinakidza kune avo vanhu vanogona kuita nyonganiso nemamwe mapurogiramu kana vasingazive maitiro ekugadzirisa mamwe mabasa avanotendera.
El nhanho nhanho maitiro inotevera:
Dhawunirodha balenaEtcher kubva zviri pamutemo webhusaiti. Kune yako GNU / Linux distro, iwe une yakasarudzika AppImage-mhando package, saka kuisirwa kuri nyore kwazvo zvisinei nedistro yaunayo. Iwe unongofanirwa kubaya kaviri pane yakadzvanywa icon kuti umhanye uye utange maitiro.
Kana uchinge waiisa, unogona mhanya Etcher. Iwe uchaona kuti graphical interface iri nyore kwazvo, kunyangwe ichienzaniswa nedzimwe nzira dziri nyore.
Mune yayo GUI iwe uchawana nhanho nhatu izvo zvinokutungamira kuti utore yako midhiya midhiya kugadzirira:
Kutanga sarudza iyo ISO chifananidzo, IMG, ZIP, nezvimwe, izvo zvawakadhonza kubva kune yekushandisa system kana software yaunoda kugadzira bootable.
Sarudza mhando yemidhiya yawakasarudza, ingave tsvimbo ye USB, inobvisa dhiraidhi, kana SD kadhi.
Iye zvino svikiro rapenya, ndiko kuti, richacheneswa, riunze fomati yakakodzera, teedzera ese mafaera ayo ane mufananidzo uye gadzirira svikiro rekutora.
Mirira kuti maitiro apedze uye kuti Etcher akuzivise. Pakupera zvinokutendera kuti usarudze pakati pekupedzisa kana kugadzira mamwe makopi akafanana neaya uchangopedza.
Iye zvino zvagadzirira iyo bootable midhiya yaunogona kushandisa chero kwaunoda ...
Ndinovimba iyi dzidziso yeEtcher yakubatsira, uye kana wanga usingazvizive, unokurudzirwa kuyedza ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Etcher: iri nyore app yekugadzira midhiya midhiya
Chinyorwa ichi chave chakanakidza kwandiri, chete kuti ndanga ndichida kuziva zvakawanda uye ndakazviongorora ndega.
Ini ndawana yakazara yakazara gwara pane etcher pa https://balenaetcher.online kana mumwe munhu akabatsira :)